မီးပြတိုက်: March 2012
စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတ စာသင်ကျောင်း
Posted by Admin in ဘာသာရေး, လူငယ်၊ ပညာရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ, အမှတ်တရ
စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတ အခမဲ့စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်မည့် အစီအစဉ်၏ ပထမဆုံးသော ခြေလှမ်းအဖြစ် (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပညာသင်နှစ်အတွက် မိတ္ထီလာ၊ သာစည်၊ ၀မ်းတွင်းမြို့နယ်များမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ဆယ်တန်း ကျောင်းသား/သူ စုစုပေါင်း အယောက် (၂၀)အား ရွေးချယ်ခေါ်ယူ၍ ဆယ်တန်းတစ်နှစ်လုံးစာ အတွက်
တာဝန်ယူပေး သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့စီစဉ်ထားရာတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာသင်ကြားမှု၌ ဖိဖိစီးစီး၊ ထိထိရောက်ရောက် ရှိစေရေးအတွက် စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် ကျောင်းသားဆောင်စီစဉ်ပြီး ကျောင်းအိပ်၊ ကျောင်းစား လေ့ကျင့် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် Section ချိန်တွင် နီးစပ်ရာ (၁၀)တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို လက်ခံသင်ကြား ပေးသွားရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ကျောင်းသားဆောင် စီစဉ်ရာတွင် မိထ္ထီလာစက်မှုဇုန်အနီးမှ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဆောင်ဝင်းတစ်ခုကို တစ်လလျှင် ကျပ်၅၀,၀၀၀ နှုန်းဖြင့် ငှားရမ်းထားရြှိပီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကျောင်းသားဆောင်ဝင်းအတွင်းရှိ အဆောင်အချို့နှင့် ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ စသည်တို့တွင် ပြုပြင်မွမ်းမံရန် လိုအပ် နေပါသဖြင့် ပြုပြင် နိုင်ရန် တစ်ဦးခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ စေတနာရှင်များ စုပေါင်း ၍သော်လည်းကောင်း၊ ကုသိုလ်ပါဝင် နိုင်ကြပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ...။
ကနဦး ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်သော နေရာများ .....
မြေသယ်ကားတစ်စီး = ၁၅၀၀၀ ကျပ်
(ခန့်မှန်း မြေသယ်ကား ၅ စီး စာခန့် မြေဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။)
ထရံတစ်ချပ် (ဒေသပေါက်ဈေး) = ၇၅၀၀ ကျပ်
(ခန့်မှန်း ထရံ ၁၀ ချပ်ခန့် လိုအပ်ပါသည်။)
သစ်သားကုတင်တစ်လုံး = ၂၅၀၀၀ ကျပ်
(ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၂၀စာ ကုတင် ၂၀ လုံး လိုအပ်ပါသည်။)
စာသင်ခုံ အရှည်တစ်စုံ = ၃၀၀၀၀ ကျပ် (၆ စုံ လိုအပ်ပါသည်။)
စားပွဲခုံ ၁ လုံး နှင့် ထိုင်ခုံ ၄ လုံး = ၃၀၀၀၀ ကျပ်
လစဉ် ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်သော နေရာများ
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တစ်ဦးချင်းစီ အတွက် ပညာသင်နှစ်
တနှစ်လုံး အတွင်းမှာ တစ်လလျှင် ပညာသင်စရိတ် ပရဟိတ အလှူငွေ
( အလှူရှင်နေရာ ၂၀ နေရာ လိုအပ်ပါသည်။)
ကျောင်းသား/သူများ အစစအရာရာ ပြီးပြည့်စုံစွာနဲ့ ပညာရေး တစ်ခုတည်းမှာပဲ အာရုံစိုက်သင်ကြားနိုင်ကြဖို့ အတွက် လိုအပ်သမျှ စားစရိတ် စသဖြင့် လိုအပ်တဲ့ အရာမှန်သမျှ အတွက် ကုန်ကျခံသုံးစွဲရန်
တစ်လလျှင် အလှူငွေ ၃၀၀၀၀ ကျပ်
(အလှူရှင်နေရာ ၂၀ နေရာ လိုအပ်ပါသည်။)
စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတအဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်လိုပါက
Posted by Admin in နိုင်ငံရေး, အတွေးမှတ်စုများ, ခေါင်းဆောင်မှု
လူသည် နိုင်ငံရေး သတ္တဝါဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒဿနိကများ နေရာတွင် နိုင်ငံရေးများ ဝင်ရောက်နေရာ ယူလာသည့် ကမ္ဘာကြီးထဲ၌ နေထိုင်နေကြသည်။
We live inaworld in which politics has replaced philosophy. (Martin L. Gross, A Call for Revolution, 1993)
နိုင်ငံရေး ဆိုသည်မှာ သွေးမြေကျခြင်း မရှိသည့် စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီး။ စစ်ပွဲ ဆိုသည်မှာ သွေးထွက်သံယို မှုများ ပြည့်နေသော နိုင်ငံရေး ဖြစ်သည်။
Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed. (Mao Zedong)
နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ စစ်ပွဲများကဲ့သို့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းသလို အန္တရာယ်လဲ ကြီးပေသည်။ စစ်ပွဲတွင် တကြိမ်သာ အသတ်ခံရနိုင်သော်လည်း နိုင်ငံရေးတွင် အကြိမ်ကြိမ်အသတ်ခံရနိုင်သည်။
Politics are almost as exciting as war, and quite as dangerous. In war you can only be killed once, but in politics many times. (Winston Churchill)
ကျွန်ုပ်တို့ အစိုးရများကို အရာအားလုံးလုပ်ဖို့ မစောင့်သင့်ပေ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး အင်တာနက်ခေတ် ရောက်နေချိန်၌ အစိုးရတိုင်းက သဘာဝအရကို နှေးကွေးလာနေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့၏ အဆင့်တိုင်း၊ ခြေလှမ်းတိုင်းအတွက် နိုင်ငံရေးထောက်ပံ့မှု့များဖြင့် တည်ဆောက် နေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
We cannot wait for governments to do it all. Globalization operates on Internet time. Governments tend to be slow moving by nature, because they have to build political support for every step. (Kofi Annan)
တရားဝင်ပြောရေးဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသူအား မည်သူမျှ မယုံကြပေ။ သို့သော် အမည်မဖော်လိုသော သတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဆိုလျှင်တော့ လူတိုင်းယုံတတ်ကြ၏။ (ရွန်နက်ဆင်း)
နိုင်ငံရေးသမားများ အတွက် အပန်းဖြေရန် အချိန်မရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် အမြဲတမ်း နိုင်ငံရေး ဘဝ၊ အာဏာ၊ ဂုဏ်အရှိန်အဝါ၊ ပျော်ရွှင်မှု့ များထက် ကျော်လွန်ပြီး တခုခုကို ရည်ရွယ်နေကြသည်။
နိုင်ငံရေးသမား ကို ကလေးအနှီးများကဲ့သို့ မကြာခဏ လဲပေးသင့်သည်။
Politicians and diapers should be changed frequently and all for the same reason. (José Maria de Eça de Queiroz, translated from Portuguese)
ကျွန်ုပ်တို့ အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး၊ အတော်ဆုံး လူတစ်ယောက်ကို မဲပေးချင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့သူမျိုးသည် မည်သည့်အခါမှ ဝင်ရောက် အရွေးခံသူ မဟုတ်ပေ။
We'd all like to vote for the best man, but he's neveracandidate. (Frank McKinney "Kin" Hubbard)
နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ နှစ်ဖက်စလုံးကို အကာကွယ်ပေးဖို့ အာမခံပေးရင်းဖြင့် လူဆင်းရဲတို့ ထံမှ မဲရယူခြင်းနှင့် လူချမ်းသာများထံမှ ကမ်းပိန်းအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးရယူခြင်း ဆိုသည့် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အနုပညာ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာနေရာတိုင်းမှာ အတူတူပဲ။ သူတို့ဟာ မြစ်မရှိတဲ့နေရာမှာတံတားဆောက်ပေးဖို့ ကတိပြုတတ်ကြတယ်။
Politicians are the same all over. They promise to buildabridge even where they is no river. (Nikita Khrushchev)
ငါတို့ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ယုံကြည်ချက်များစွာ ရှိကြတယ်။ ခက်တာက ငါတို့ ယုံကြည်ချက်တွေကို ပုံအပ်ဖို့ လူကောင်းတွေ နည်းနေတာပဲ။
We have plenty of Confidence in this country, but we arealittle short of good men to place our Confidence in. (Will Rogers)
နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ အမှား၊ အမှန် ဆိုတာ ထက် လက်ဝဲ၊ လက်ယာ ဝါဒ များနဲ့ ပိုဆက်နွယ်နေသလိုပါပဲ။
Politics, it seems to me, for years, or all too long, has been concerned with right or left instead of right or wrong. (Richard Armour)
လူအချို့သည် ယင်းတို့ချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများအတွက် ပါတီကို ပြင်ကြ၏။ အချို့မှာ ပါတီအတွက် ယင်းတို့ ချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများကို ပြင်ကြ၏။
Some men change their party for the sake of their principles; others their principles for the sake of their party. (Winston Churchill)
လူတစ်ယောက်အား အရှိန်အဝါကြီးမားစေသည့် အရည်အသွေး (အရည်အချင်း) ဆိုသည်မှာ ထို အရှိန်အဝါ ရဖို့အတွက် ဦးဆောင်ခဲ့သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ထို အရှိန်အဝါအား မည်သို့ အကျိုးရှိရှိ၊ အမြော်အမြင်ရှိစွာဖြင့် သုံးစွဲခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
The qualities that getaman into power are not those that lead him, once established, to use power wisely. (Lyman Bryson)
သင့်ရဲ့ မိသားစု ဆွေစဉ်မျိုးဆက် အကြောင်း နောက်ကြောင်းကောက်ဖို ပိုက်ဆံကုန်မခံပါနှင့်။ နိုင်ငံရေးသာ လုပ်လိုက်ပါ။ သင့်ပြိုင်ဖက်များက သင့်အတွက် လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးသမားတွေ နည်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့အတွက် မျက်နှာ နှစ်မျက်နှာကို မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ ဒုက္ခရောက်လို့ပဲ။
နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်အား မြို့တော်အတွက် သော့ပေးလိုက်ခြင်းထက် သော့ခလောက် လဲ လိုက်ခြင်းက ပိုကောင်း၏။
လူလတ်တန်းစား အများစု ပါဝင် ထိန်းချုပ်ထားသည့် နိုင်ငံရေးမှသာလျှင် ပြီးပြည့်စုံသည့် နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။
သာမန် နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးသည် နောင်လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စဉ်းစား၏။ အတွေ့အကြုံရှိသည့် ဝါရင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တို့သည် နောင်မျိုးဆက်အတွက် စဉ်းစားသည်။
A politician thinks of the next election;astatesman thinks of the next generation. (James Freeman Clarke, Sermon)
ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ သင် သဘောမကျမှု၊ စိတ်တိုင်းမကျမှု အနည်းဆုံးသော သူကို မဲပေးခွင့်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
Democracy is being allowed to vote for the candidate you dislike least. (Robert Byrne)
သင့်တိုင်းပြည်က သင့်အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ မမေးပါနဲ့၊ သင့်တိုင်းပြည်အတွက် သင် ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ အရင်ဖြေပါ။
Ask not what your country can do for you. (John F Kennedy)